မောင်းတောသတင်းအမှန်ဖတ်ကြမယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မောင်းတောသတင်းအမှန်ဖတ်ကြမယ်
Posted by Yel Kaung on Jun 9, 2012 in News | 31 comments
အနည်းဆုံး ရိုဟင်ဂျာရွာပေါင်း (၃၀)ကျော် မီးရှို့ခံရပြီး ရိုဟင်ဂျာ ဦးရေး ခလေး လူကြီးနည်းဆုံး (၁၀၀)နီးပါး အကြမ်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ခံရကြောင်း ထိုသို့ သတ်ဖြတ်ရာတွင် ရခိုင်လူမျိုးအရပ်သားများက သတ်ဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ စစ်သားနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့က အရပ်သားဟန်ဆောင်၍ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်နေကြောင်းသိရသည်။ မိုးဆယ်အုပ်စုက ရိုဟင်ဂျာရွာအားလုံး၊ ၃ မိုင် ၊ ၄မိုင် ရှိရိုဟင်ဂျာရွာများနှင့် မြို့ ဦး ဒူလာဖာရာရှိ ရိုဟင်ဂျာရွာ
အားလုံးရှိ အိမ်းပေါင်း ထောင်ကျော် မီးရှို့ခံရပြီး အိမ်တွင်းနေ အိမ်သားများ အိမ်ပြင်ထွက်လာပါကအဆင်သင့် စောင့်နေသူ စစ်သား ရဲသားများက သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်၍ အကြီးအကျယ်သတ်ဖြတ်နေကြောင်း သိရသည်။ ရိုဟင်ဂျာကို မျိုးပြုတ်သတ်ဖြတ်နေသူများသည် ရခိုင်လူမျိုး ရဲတပ်ဇွဲ့ဝင်များ၊ န.စ.က တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် လုံထိန်းများနှင့် စစ်သားများသာဖြစ်ပြီး အရပ်သား ရခိုင်လူမျိုးအားလုံးကို ဘုန်းကြီးကျောင်းအသီးသီး၌ ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းသိရသည်။
ဆက်လက်ပြီးတင်ပေးပါမယ် ကျွန်တော်စာရေးသူသည် အခုအချိန်ထိ မောင်းတောကို ဖုန်းဖြင့် စကားပြောနေပါသည်။ ကြားသမျှသတင်းများကို အချိန်နဲ့ တပြေညီတင်ပေးပါမည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က မူစလင် ရိုဟင်ဂျာများကို အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ရန် ကြိုတင်စီစဉ်းထား၍ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်နေကြောင်းသိရသည်။ အချို့ သတင်းများမှာ ရိုဟင်ဂျာများက လုပ်နေသလိုလို သတင်းလွှင့်ကာတကယ်တန်း အမှန်စင်စစ် သတ်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာလူထုများသာဖြစ်နေပါသည်။
ဒီသတ်ဖြတ်မှုမှာ သတင်းမှားတွေ လွှင့်နေသော သတင်းဌာနအားလုံး တာဝန်ယူ ဖြေရှင်ရပါလိမ့်မည်။
အပိုင်း (၄) မောင်းတော့မြို့ အနှံ့ ရိုဟင်ဂျာရွာများကို ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့၍ လူကိုအစုလိုက်
အပြုံလိုက် စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ပူးပေါင်းအကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မှုကြီး အကြီးအကျယ် လုပ်နေကြသည်
အရပ်သားဟန်ဆောင်ထားတဲ့ စစ်သား ရဲနှင့် လုံထိန်းများက ရှေ့ဆုံးက အိမ်များကို မီးရှို့ အိမ်တွင်းထဲကထွက်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာများကို ယူနီဖောင်းဝတ် န.စ.က၊ လုံထိန်းနှင့် ရဲများက စီကြိုပစ်ခတ် အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်နေကြသည်။ အမှတ်( ၅ ) ရပ်ကွက်ထဲက ရိုဟင်ဂျာ မူစလင်အိမ်များကို သီးသန့် ရှာဖွေး၍ မီးရှို့  သတ်ဖြတ်နေခြင်းဖြစ်ဟုသိရသည်။ အမှန်(၅)ရပ်ကွက်မှ အာမီဆာဖ်ရဲ့ အိမ် မီးစွဲလောင်းရာ၌ အာမီရ်ဆာဖ်ဆိုသူက အပြင်ထွက်လာရာမှ အသင့်စောင့်နေသော လုံထိန်းများက ပစ်ခတ်သဖြင့် သေဆုံးသွား
ပြီး သား(၂)ဦးဖြစ်သူ အသက် (၁၈) နှစ်နှင့် (၇) နှစ်အရွယ်တို့သည် ဖခင် အပြင်ထွက်ရာတွင် ပစ်ခတ်သေဆုံးသွားသည်ကို တွေ့ရှိသွားပြီး အပြင်မထွက်ရဲသဖြင့် အိမ်တွင်း၌ပင် မီးလောင်းသေဆုံးသွားကြောင်းအခုလေတင်သိရသည်။ သေဆုံးသူတို့၏ အလောင်းများကို စစ်ကားပေါ်တင်၍ အလောင်းများကို ဖျောက်ဖျက်နေကြောင်းလည်းဆိုကြသည်။ လုံထိန်း၊ရဲ၊ န.စ.ကနှင့် စစ်သားတို့၏ ပစ်ခတ်ခံရပြီး မသေဘဲ အသက်လုပြေးလာသူများနှင့် အိမ်မီးရှို့ခံရပြီးနောက် ထွက်ပြေးလွှတ်မြောက်လာသူတို့မှ ၎င်းသတင်း များကို စုံစမ်းသိနေရခြင်းဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ပြီ သေဆုံး သတင်းတစ်ခုကို သယ်ဆောင်လာသူတင်္စဦးနှင့်
ကျွန်တော်စကားပြောနေပါသည်။ မိုဟာမက်စီဒီခ် အသက် ၅၅ နှစ်ခန့် ရာန်မောဂုနာ(ခ)ရေတွင်းကျွန်းမှဖြစ် ပြီး၊ ကော်ဘိရ်အာမတ်(အဘ) ရှော်ဘိရ် အသက် (၁၈)နှစ် ရေတွင်းကျွန်းတို့သည်လည်းသေနတ် ဒဏ်ရာဖြင့် ပြေးလာကာ အခုစကားပြောနေသည့် အိမ်နဲ့ မလှမ်းမကမ်း၌ သေဆုံးသွားကြောင်းသိရသည်။
လူမျိုးတုံး အကြမ်းဖက်သတ်မှုကြီးတရပ်ကို အစီစဉ်တကျ စနစ်တကျ ယူနီဖောင်းဝတ်များက လုပ်နေသည့် အတွက် ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာ မူစလင် အားလုံး ကြောက်လန့် နေကြကြောင်း ငိုယိုးပြောသူများဖြင့် ဆူညံနေသဖြင့် သတင်းကိုတောင် မနည်းနားထောင်ယူရသည်။
စောက်ကလဒိန်ကောင်လီးဘဲကွာ ခွေးသခိုးက လူလူဟစ်မနေနဲ့
သီးမခံနိုင်တော့ဘူး ကိုမေကို -ိုး ရိုဟင်ဂျာတွေ
ကျန်သွားလို့ ဖတ်ရတာ အားရလိုက်ပါဘိ ပျော်လိုက်တာ
ကလိန်စေ့ငြမ်းဆင်ပြီးပြောနေပြန်ပြီ ။ မျိုးမစစ်ကောင်တွေ ။
ဒီပို့ စ်တင်တဲ့ကောင်လောက် သောက်ခွက်ပြောင်တဲ့ကောင်မျိုး မတွေ့ ဘူးသေးဘူးဗျာ ။
ဒီသတင်းမျိုး တင်ပေးလို့ ၀မ်းသာလိုက်တာဗျာ ……
သူခိုးက လူကို ပြန်ဟစ်နေသေးတယ် ခွေးသူတောင်းစားတွေ……
နင်တို့ထိမှ နာလာတာလား။ အစိုးရတကယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တောင် ၀မ်းသာအားရလက်ခုပ်တီးပြီး
ဒါမှတို့အစိုးရ ကွလို့အော်ပေးလိုက်ဦးမယ်။ အလဲဗင်းမှာတင်ထားတဲ့ ပုံတွေကတော့ နင်တို့ကုလားတွေ
ခေါင်းမှာ အဆောင်းတွေနဲ့ ကောင်တွေပုံပါလား။ လက်ထဲမှာလဲ တုတ်တွေ ဓါးတွေ ကိုင်ထားတယ်နော်
Mandalay Thar says:
သတင်းမှားတွေတင်တဲ့သူကို ရွာမှ ထုတ်ပြစ်သင့်ပါကြောင်း….:(
ကဲ ..ရွာသား /သူ စစ်စစ်တွေ
စဉ်းစားကြ … ကျန်တဲ့ သတင်းတွေလည်း ဖတ်ကြ ဒီနေရာမှာ ဆူပူအောင် လုပ်နေကြပြီ
အကောင်းဆုံးကတော့ အရင်လို အဖြစ်မျိုး မဖြစ်ဖို့ပဲ ။
မင်းရဲ့ပို့်စ်.ထဲမှာပါတဲ့(အနည်းဆုံး ရိုဟင်ဂျာရွာပေါင်း (၃၀)ကျော် မီးရှို့ခံရပြီး ရိုဟင်ဂျာ ဦးရေး ခလေး လူကြီးနည်းဆုံး (၁၀၀)နီးပါး အကြမ်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ခံရကြောင်း)ဆိုတာမှန်ရင်…ငါဝမ်းနည်းကြောင်း
အဲ့ဒီကိုလည်း ကြည့်လိုက်ပါအုံး ကလဒိန်
MG က သတင်းအမှန်တွေကိုပဲလိုချင်တာပါ။ မဟုတ်တာတွေလျောက်မတင်ပါနဲ့။ အာရုံနောက်တယ်။ မင်းတစ်ယောက်အတွက်နဲ့ MG နာမည်ပျက်မှာကို မလိုလားဘူး။ မင်းလဲ ရိုဟင်ဂျာ ပဲထင်တယ်။ မင်းသတင်းမှန်ဆိုရင် ဓါတ်ပုံနဲ့သေသေချာချာတင်ပါ။ မင်းလိုသတင်းမျိုး ဘယ် မှာမှမတွေ့ရဘူး။
အလောင်းကိုဖျောက်ဖျက်စရာမလိုဘူးကွ ပေါ်တင် မီးရှိူ့ယုံဘဲ ခုရေးတဲ့ရဲခေါင်ကကော ရိုဟင်ဂျာလက်ပါး
တန်ပြန်လှည့်စား သတင်းရေးပုံလေး အရမ်းကောင်းတယ်
ဒီနေရာမှာ ကျုပ်တို့ဂေဇက်မန်ဘာတွေအနေနှင့် ပညာရှင်အဆင့် ဖြေရှင်းနည်းတွေကိုထုတ်သုံးသင့်တယ်
ဆိုတော့ကာ ကျုပ်ကဘဲ ပညာရှင်ယောင်ယောင်ဘာယောင်ယောင်နဲ့ လုပ်စားကြည့်ပါမယ်
မီးခိုးထွက်နေတဲ့နေရာရယ် သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ စစ်သားရယ် ပုံတစ်ပုံတွေ့တယ်ဗျ
အုပ်အော်သောင်းတင်း အကြမ်းဖက်နေတဲ့သူတွေကို စစ်တပ်က ရပ်ကြည့်နေတာလေးက
ဘပုရေ…. ကျနော်ဘပုရဲ့လင့်ကြီးကို ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်သယ်လာတယ် .. ခွင့်ပြုပါ။
အုပ်အော်သောင်းတင်း အကြမ်းဖက်နေတဲ့ ကုလားတွေအဲ့နေရာတင် အမျိုးဖြုတ်ပစ်လို့ရတယ်။
BBC ကလည်း မောင်တော မှာ ကုလားတွေ ကို အကြမ်းဖက် နှိပ်စက်နေကြောင်း ရေးထားတယ် တဲ့ … တောက်…
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-18368556 ဖတ်ကြည့်ကြပါ ဖတ်ကြည့်ကြပါ….
ဘီဘီစီ ရေးသားချက်ကို ကန့်ကွက်ပါတယ် ။ ဆန္ဒပြတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဆူပူသောင်းကြမ်းတာပါ ။ စာသားပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုပါသည်။
မဟုတ်တာတွေလာတင်မနေနဲ့ စောက်ကုလားေ၇ မနေ့က မောင်းတောနဲ့ ဖုန်းပြောပြီးပြီ ၇ခိုင် တွေကို သတ်နေတာ မီးရှိ့ နေတာတွေ ကို မောင်းတော ကအသိတယောက်က ဖုန်းဆက် ပြောတယ် မမှန် သတင်းတွေလာ မတင်နဲ့ အမှန်ကိုတင်ပါ မှန်တာကို ပြော၇င် ထောက်ခံမယ် လူမျိုးေ၇းလဲမခွဲဘူး ဒါဘဲ အမှန်ကိုဘဲဖတ်ချင်တယ်
BBC ညာနေသည်။ BBC လိမ်နေသည်။ BBC သွေးထိုးပေးနေသည်။ အဲဒီသတင်း ဌာနကို… နောင်များတော့
မယုံတော့ဘူး BBC ရေ။
ဟေ့ကောင် ခွေးသား ဘာတွေလျှောက်လိမ်နေတာလဲ။ အေးမင်းပြောသလိုဖြစ်အောင်သတ်ပြမယ်။
ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီတွေ မျိုးတုန်းအောင်ကို သတ်ပစ်မယ်။
ဒီပိုစ် တင် တဲ့ yel kaung ဆို သူ က သူ့ရဲ့ပထမ ပိုစ်ထဲ က သူ ဘာကောင်လဲဆိုတာ ဖေါ်ပြနေပါတယ် မမှန်မကန် ထင်ယောင်ထင်မှားပြု ခြင်းများကို လက်မခံသင့်ပါဘူး
ငါသာ ဟစ်တလာလို အာဏာရခဲ့ရင်
ငါသာ နပိုလီယံလို စစ်နိုင်ခဲ့ရင်
ငါသာ ဒေးဗစ်ကော့ပါးဖီးလို အားလုံးကိုပျောက်ကွယ်စေနှိုင်ရင်
အရင်ဆုံး….ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ကောင်တွေ ရခိုင်ကနေ တစ်ကောာင်မှမရှိအောင် မျိုးဖြုတ်ပစ်မယ်။